Kukakavara Kurwisa Nhoroondo uye kweKupinda-Kuenda | Martech Zone
Ndanga ndichiita hurukuro inonakidza neshamwari yangu, Chad Myers we3 Hats Kushambadzira, tichikurukura kuti hupfumi hwedu hwekurima pamwe neRevolution Revolution zvakatungamira sei kumaitiro edu emazuva ano ekushanda. Kunge komputa yedu QWERTY keyboards . vashandi uye sarudzo dzekushanda. Uye zvine hukasha zvisina basa.
Maitiro Ehupfumi hweKurima Anobata Sei Maitiro Ekushanda
Paunotarisa kune Vacheche Boomers uye yavo yemhuri kubatana nevekurima, 1 mu4 maAmerican yaive neimwe nzira yakabatana nepurazi, kazhinji purazi yemhuri. Kare kumashure, uye kunyange nanhasi, iwe wakamuka pakuvira kwezuva, ukashanda kuti rinyure zuva. Iwe waisakwanisa kushanda husiku, nekuti minda yakanga isina kubatidzwa uye matirakita aive asina mwenje. Iwe wakashanda masikati, nekuti madzibaba avo akashanda masikati, sezvakaita madzibaba avo, uye madzibaba avo pamberi pavo. Chaizvoizvo, kubvira zvatakange tiine zvekurima munyika muno, waishanda masikati uye wakarara husiku.
Mazuva ano, hatifanire kuzviita. Tine magetsi emagetsi, isu tinokwanisa kushanda munzvimbo dzenguva, nekutaurirana ipapo ipapo neInternet inomhanya.
Maitiro Eindasitiri Shanduko Inobata Sei Maitiro Ekubata
Nekukurumidza kumberi kunopera kwema1800 uye kutanga kwema1900, apo mafekitori akamuka uye otomatiki akaunza vanhu kubva kumapurazi kuenda kumaguta kunotsvaga basa. Zvino, kana paine chingada kuvakwa, chakagadzirwa mufekitori. Uye nekuti vanhu vaibva kumapurazi, vaitofanira kushanda pakati pe8 ne5 zvakare.
Asi ikozvino, nekuti fekitori yaive munzvimbo imwechete, basa raifanirwa kuitirwa panzvimbo. Zvishandiso zvako zvaivepo. Chigadzirwa chako chaivepo. Iwe wanga uri chikamu chehurongwa, uye dai wanga usipo, hurongwa hwakatadza. Zvaive zvakakosha kuti iwe uuye.
Mazuva ano, isu tichiri kutarisirwa kuratidzira. Basa redu rinoitwa muchivako chehofisi. Tinofanira kusangana nevanhu muchiso. Isu tinofanirwa kugara mumapurazi edu madiki, uye toenderera nezvatinobuda. Iwe uri chikamu chegadziriro, asi uye hezvino izvo mamaneja vasati vaziva izvozvi iyo system haifi yakakundikana nekuda kwekuti iwe hausi muchivako.
Chikamu chechikonzero kushomeka kwekuvimba kune iyo mamaneja. Kana vasingakwanise kutitarisa, havazive kana tiri kuita basa kuti riitwe. Ivo vanotenda kuti isu tinogona kushandisa yakawanda nguva tichinakidzwa pane kuita kuti basa riitwe. Usambofa wakafunga kuti vanogona kutaura izvozvo zvakadaro, kana vanhu vakasasangana nenguva dzakatarwa uye kugadzirwa kuri kumusoro kana pasi, kunyangwe kana vanhu vari munzvimbo yacho. Asi nekuda kwechimwe chikonzero, mamaneja anofunga kuti vanhu vanofanirwa kuve varipo nguva dzese, kana pasina chichaitwa.
Dambudziko rezana ramakumi maviri nemasere rakakonzerwa ne21th Century Kufunga
Mazhinji makambani nemasangano ehurumende vachiri kufunga maererano nezana ramakore rechi19 kana zvasvika panguva dzinotambirwa dzekushanda. Iwe fanira kuva muhofisi kubva 8:00 am kusvika 5:00 pm. Haubvumidzwe kushanda pamba, uye hautenderwi kushanda kubva na9: 00 - 6:00, kana Ngazvisadaro! 10: 00 - 7: 00.
Makore mashoma apfuura, pandakanga ndichishandira iyo Indiana State Dhipatimendi Rehutano, Ini ndaive pamwe nebasa rehurongwa hwecontgency hwataizoshandisa kana pani furu yakamborova United States. Nekudaro, yakawanda yacho yaitenderedza vanhu vachikwanisa kushanda kubva kumba. Wese munhu akada hurongwa uye akati ndizvo chaizvo zvataida.
"Zvakanaka," ndakadaro. “Tinofanirwa kuzviita kakati wandei, uye nekuona kuti munhu wese anokwanisa kuzvishandisa. Izvi zvinoita kuti vashandi vanodiwa vashande makink, vave nechokwadi chekuti vanogona kuwana mukana wepamhepo, uye kuti tekinoroji yedu yese inoshanda. Nenzira iyi, patinozviisa mukuita, hatisi tese tiri kufonera dhipatimendi reIT pazuva rekutanga. ”
"Kwete, hatidi kuita izvozvo," ndiyo mhinduro. “Tinoda kuti munhu wese ashande pano. Hatitenderi foni. ”
Ndizvozvo. Kupera kwehurukuro. Isu hatiite telecommuting. Dhipatimendi rakakura muhurumende yenyika, iro dhipatimendi rinotarisira mhinduro yenyika pan flu, uye isu hatina “idya zvedu imbwa chikafu. ” Saka, hapana kuyedzwa, zvichidaro zvichiremadza mhinduro yesangano rose kana nguva yakwana.
* kugomera *
Iyo 21st Century Solution
Ini handidzivirirwe nemhando iyi yekufunga futi. Saiye muridzi webhizinesi, ini handina kumbove neyakajairwa nguva yebasa kweanopfuura gore. Ini ndinosvika kuhofisi nguva dzaenda, nekuti ndinononoka kurara, kazhinji kuma2: 00.
Asi ini ndichiri kunzwa ndine mhosva kana alarm ikarira na8: 00, uye ndofunga, "ndinofanira kunge ndiri muhofisi," kunyangwe kana muviri wangu uchityisidzira kundimanikidza kuenda kukoma-inotadza kurara.
Asi, ndinowana zhinjisa rebasa rangu rinoitwa manheru nemanheru. Ini ndinotyaira kuenda nekudzoka kuhofisi mumaawa asiri epamusoro, zvinoreva kuti ndinoshandisa gasi shoma. Ndinoshandisa nguva yangu kupinda-kuenda kubva kuzvitoro zvekofi kana maresitorendi madiki. Imafuta mangani atinogona kuchengetedza gore rega rega kana vashandi vaikwanisa kugadzirisa avo e-muhofisi mashedhi kuti aenzanise iwo akanakisa marongero ebasa?
Dai makambani akabuda mune ino "isu hatigone kuvimba newe" nzira yekufunga, uye nekuwana nzira nyowani dzekubvumidza vashandi kuti vashande kubva kumba, tinogona kudzikisa peturu yedu. Tinogona kudzikisa mashandisiro emari, uye kunyangwe zvivakwa uye mari yekurenda, kana isu tiine diki rekambani tsoka. Fungidzira uchishandisa chivakwa chegumi chehukuru hwepakutanga, hwakazadzwa pasina chinhu kunze kwemakamuri emusangano, makamuri emusangano, uye mamwe makubhiti kune vanhu vanoda kushandisa nguva muhofisi musangano usati kana kana wapera.
Kana makambani nemasangano ehurumende vakwanisa kujoina iyo 21st century, isu tinogona kuita zvimwe zvinhu zvinoshamisa. Kusvikira panguva iyoyo, isu tichachinjisa zvipanera zvedu pamutsetse wegungano, uye tobatanidza mabhiza nekurima minda.
Tags: kuendaasaitamaawa emahofisimaawa ekushandakushanda uchibva kumba
Kusimudzira kwandakaita Hullabaloo! aka Cheated…
Mar 27, 2010 pa 11: 03 AM
Anotyisa post, Erik. Ini ndinowedzera kuti ndinotenda kuti dambudziko rakawanda rinobva mukushaikwa kwekunzwisisa kwenyika ino kwekuti "Utungamiriri chii". Ruzhinji rwevatungamiriri vasina ruzivo rwandinosangana navo vanotenda kuti ibasa ravo 'kugadzirisa' vanhu nemaitiro. Nekuda kweizvozvo, vanoisa pfungwa pazvinhu zvisina kunaka… hunhu husina kunaka hwevashandi vavo, nyaya dzisina kunaka nezvigadzirwa nemasevhisi, nyaya dzakaipa nebhizinesi ravo.
Panogara paine chinhu cheku 'gadzirisa' nemunhu wese uye nerimwe bhizinesi. Iri harisi iro basa remutungamiri. Mutungamiri anofanirwa kunge achifunga nzira yekuburitsa tarenda muvashandi vavo, maitiro ekuvandudza simba rezvigadzirwa nemasevhisi avo, uye mashandisiro ezvinoshamisa zvinhu zviri kuitwa nebhizinesi ravo kuti zvikure.
Nehurombo, isu tinosimudzira vanhu kusvika padanho rekusagona. Isu hatipe vatungamiriri vedu kana manejimendi chero CHIDZIDZO pamusoro pemaitiro ekugadzirisa vanhu zvinobudirira. Zvakanyanya kushata!
Mar 29, 2010 pa 8: 09 PM
Zvinonzwika sekunge iwe unoda kushanda muROWE 🙂